यी ३ राशी हुनेहरु जसको अकाल मृत्युको सम्भावना, कतै तपाई त पर्नु भएन? हेर्नुहोस ! « Onlinetvnepal.com
यी ३ राशी हुनेहरु जसको अकाल मृत्युको सम्भावना, कतै तपाई त पर्नु भएन? हेर्नुहोस !
Published : 15 May, 2019 5:31 pm
कुनै पनि व्यक्तिको जन्मपछि मृत्यु निश्चित छ । यहासम्म कि यस भू लोकमा सास फेर्ने हरेक प्राणीहरुको एक दिन अन्त्य अवश्य भएरै छाड्छ। तर कहिले अनि कसरी हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा चाही जो कोहि पनि अनबिज्ञ नै हुने गर्छन। मान्यता अनुसार संसारमा हर प्राणीको जन्म मृत्युको बिषयमा स्वयम् भगवान शिवाय अरु कोहि पनि पनि जानकारी हुदैन।
ज्योतिषशास्त्रका अनुसार जन्मकुण्डली हेरेर पनि जो कोहीको मृत्युको समय निर्धारण गर्न सकिन्छ तर यो सबै माझ लागु नहुनाले सबै कुराको जिम्मा भगवानको हातमा छोड्ने गरिन्छ। ज्योतिषशास्त्रका अनुसार १२ राशी मध्ये यी ३ राशी हुने मानिसहरु अकाल मृत्युको चपेटामा पर्न सक्ने विश्लेषण गरेको छ। ति कुन कुन ३ राशी हुन् त जसको अकाल मृत्युको अधिक सम्भावना रहेको छ , भगवानसंग यो प्रार्थना गर्नुहोस कि यस लिस्टमा तपाईको राशी नपरोस:
अकाल मृत्युको सम्भावना रहेको ३ राशी मध्ये वृष राशी पनि एक हो। यस राशी भएको व्यक्तिहरुको जीवनमा ग्रहको नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएको हुनाले स्वास्थ्य सम्बन्धी बिशेष ध्यान दिनु अति आवश्यक रहेको छ।
कुम्भ राशी भएकाहरुले आफ्नो स्वास्थ्यमा बिशेष सावधानी अपनाउनु आवश्यक रहेको छ। समय समयमा शारीरिक समस्याको भागीदार हुन सकिने भएकाले डाक्टरको उचित सल्लाह सुझाव लिई राख्नु आवश्यक छ। कुम्भ राशीमा ग्रहको नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने भएकाले ग्रह दोष निवारणका लागि विभिन्न उपाय अपनाउनु पनि आवश्यक रहेको छ।
अकाल मृत्युको भय हुने सम्भावना रहेको अर्को राशी हो कर्कट राशी। यस राशी भएका व्यक्तिहरुले जीवनमा हरेक प्रकारका समस्याहरुको सामना गर्नु पर्ने हुन्छ। अधिक मात्रामा स्वास्थ्य समबन्धी समस्या आउने भएकाले स्वास्थ्यसम्बन्धी बिशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ।